Strapless Sticky Push Up Silicone Invisible Bra ကိုဝယ်ပါ - အခမဲ့ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် အခွန်မဆောင်ပါ | WoopShop®
Strapless Sticky Push Up Silicone မမြင်နိုင်သော Bra
အရောင် A-Skin ပါ B-Black B-Skin ပါ A-Black
အရွယ် ခခ ခွက်တစ်ခွက် စီဒီခွက်
A-Skin / တရုတ် / B ခွက် A-အရေပြား/တရုတ်/Aခွက် A-Skin / China / CD ခွက် B-Black / တရုတ် / CD ခွက် B-Black / တရုတ် / B ခွက် B-Black / တရုတ် / A ခွက် B-Skin / တရုတ် / A ခွက် A-Black / China / CD ခွက် A-Black / China / B ခွက် A-အနက်ရောင် / တရုတ် / ခွက် B-Skin / တရုတ် / CD ခွက် B-Skin / တရုတ် / B ခွက်
Strapless Sticky Push Up Silicone Invisible Bra - A -Skin / China / B ခွက် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ရင်းနှီးသောဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: Breast Petals
96 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
На2размер, B подошёл။ Держится крепко, не спадает, продавец положил дополнительно резинку для волос.
အရောင်မှန်တယ်။ ပုံထဲကလိုပဲ ခလုတ်ကို ဖြုတ်လို့ရပြီး အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ စိတ်တိုင်းကျ ညှိလို့ရတယ်။ တခြား size နဲ့ အရောင်တွေဝယ်မယ်။ ကျေနပ်ပါတယ်။
အရောင်ကတော့ ပုံထဲကအတိုင်းပါပဲ။ အမြန်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ နောက်တစ်ပတ်မှာ ပါတီတစ်ခုရှိတယ်။ ဝတ်လိုက်မယ်။
ငါ ခွက်တစ်ခု မှာထားပေမယ့် ငါb(ငါ့အမှား) က အရမ်းကြိုက်တယ် ငါက အရမ်းကြိုက်တယ်။